Imboni Yokuhlunga Elingene | I-china isihlungi se-Medium Efficiency Filter
ukwahlukanisa ukusebenza kahle kwesihlungi
Isihlungi sisebenzisa ukwahlukanisa kwe-wavy okumise okwe-L. Ngemuva kokuklama, inokusebenza okuphezulu kokuhlunga, umthamo omkhulu wokubamba uthuli, ivolumu yomoya yokuhlunga ephezulu nezinye izinto. Isetshenziswa kabanzi ekugcineni kokuhlanzwa komoya kohlelo lokupholisa umoya jikelele, uhlelo lokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokuphakelwa komoya okusha. Ukushisa okujwayelekile okusetshenzisiwe kungaphansi kwama-80 degrees. Impahla yomngcele ifreyimu ehlanganisiwe, ifreyimu ye-aluminium nohlaka lwensimbi olungagqwali.
isikhwama somoya esikhwameni sokuhlanza kahle ukusebenza okuphakathi kwesihlungi se-fiber
Isihlungi sisebenzisa isihlungi esenziwe ngokuhlunga esisha esingalukanga (isihlungi sinikeza ukusebenza kahle kuka-60-65%, 80-85%, 90-95% nabanye), ngemuva kokubumba, kunokusebenza kahle kokuhlunga, amandla amakhulu okubamba uthuli, ukumelana okuphansi, izindleko zokusebenza eziphansi nezinye izici. Isetshenziswa kabanzi ekuhlanzweni komoya komoya ngohlelo lokupholisa umoya jikelele, uhlelo lokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokuphakela umoya omusha, ingasetshenziswa njengesihlungi sangaphambi kokuhlunga okuphezulu ukwandisa impilo yenkonzo yayo. Ukushisa okujwayelekile okusetshenzisiwe kungaphansi kwama-80 degrees. Kunezinto ezimbili uchungechunge impahla emngceleni: lashukumisa ingxenye alo aluminium ingxubevange.
v-hlobo ukusebenza kahle okuphakathi v isihlungi somoya sasebhange
Isihlungi sisebenzisa isihlungi se-V-BANK sokusebenza okuphakathi (isihlungi sinikeza ukusebenza kahle kwe-
I-60-65%, i-80-85%, i-90-95% nezinye), ngemuva kokuyakha, inokusebenza kahle okuphezulu, umthamo omkhulu wokubamba uthuli, umthamo omkhulu wokuhlunga umoya nezinye izici. Isetshenziswa kabanzi ekugcineni kokuhlanzwa komoya kohlelo lokupholisa umoya jikelele, uhlelo lokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokuphakela umoya omusha, ingasetshenziswa njengesihlungi sangaphambi kokuhlunga kokusebenza kahle kwe-ultra ukunweba impilo yenkonzo yayo. Ukushisa okujwayelekile okusetshenzisiwe kungaphansi kwama-80 degrees.